बानेश्वरमा बसेर अस्ट्रेलियाको कार्ड होल्डर हुँ भन्दै यसरि सुताइन केटाहरु २३ वर्षीया रोजिनाले ! – ताजा समाचार
बानेश्वरमा बसेर अस्ट्रेलियाको कार्ड होल्डर हुँ भन्दै यसरि सुताइन केटाहरु २३ वर्षीया रोजिनाले !
सुनसरी, बर्जु गाँउपालिका–६ की २३ वर्षीया रोजिना अधिकारी काठमाडौँ, नयाँ बानेश्वर बस्दै आइरहेकी थिइन्। उनी भेट्ने जो कोहीलाई आफू अस्ट्रेलियाको पीआर होल्डर भएको बताउँथिन्। पीआर होल्डर भन्दै उनले केही समयअघि काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४, माकलबारी बस्ने अमृत श्रेष्ठसँग कोर्ट म्यारिज गरिन्।
अमृत प्लस टू सकेर अस्ट्रेलिया जाने तरखरमा थिए। आईएलटीएसमा राम्रो अंक नआएपछि उनी कसैसँग डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया जान चाहन्थे। यही क्रममा उनको भेट रोजिनासँग भयो। केही समयको चिनजानपछि रोजिनाले अमृतलाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने वाचा गरिन्। र, उनीहरूले अदालती विवाह गरे।
अस्ट्रेलिया जाने धुनमा रहेका अमृत जे गर्न पनि तयार थिए। प्रोसेस गर्दा पैसा लाग्ने भन्दै उनीसँग रोजिनाले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागिन्। छोरालाई विदेश पठाउने योजनामा अमृतका बाबुले रोजिनाको हातमा पैसा हालिदिए। ्
पैसा लिएको भोलिपल्टदेखि उनी सम्पर्कविहीन भइन्। अस्ट्रेलिया नै नदेखेकी रोजिनाले ‘अस्ट्रेलियाको पीआर होल्डर हुँ’ भन्दै आफूलाई ठगेको थाहा पाएपछि अमृतले प्रहरी गुहारे। केही समयपछि काठमाडौँ, मध्यबानेश्वरमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो।
महानगरीय अपराध महाशाखाको अनुसन्धानमा उनले भक्तपुर, चाँगुनारायण नगरपालिका–३, दाहाल गाउँ बस्ने सागर धमलालाई पनि ठगेको खुल्यो। उनले धमलासँग १३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको थाहा भयो।
उनी आफू मात्र ठगीमा संलग्न थिइनन्। उनलाई यो कार्यमा परिचालन गर्ने सिन्धुली, कमलामाईका गणेश भन्ने अरबिन स्याङ्बोलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। उनी काठमाडौँ, बाँसबारीमा रहेको एसियन इन्टरनेसनल कन्सलट्यान्सीका एकेडेमिक डाइरेक्टर हुन्। केही समयअघि उनीहरू दुवै जना धरौटीमा छुटे।
महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुका एसएसपी सहकुल थापा भन्छन्, ‘हाम्रोमा महिलाहरू पनि ठग हुन्छन् र ? भन्ने मानसिकता छ। तर, मोटो रकम ठगीको आरोपमा धेरै महिलालाई हामीले पक्रिएका छाँै।’
ठगी गर्ने महिला वा पुरुषमा सजिलै अरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने कला हुने उनी बताउँछन्। त्यस्तै, ठगिइने व्यक्तिको पनि केही न केही दोष हुने उनको मत छ। ‘कतिपय अवस्थामा मानिसलाई लोभले लाभ लाभले विलाप गराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नचिनेका मानिससँग छिट्टै नजिकिने र आर्थिक कारोबार गरिहाल्ने गर्नु हुँदैन। भोलि उनीहरूले कतिखेर आफूलाई खाल्डोमा हाल्छन्, थाहै हुँदैन।’